Korona kadib 5 arrimood oo shirkadaha lagama maarmaan u ah - Tilmaan Media
Korona kadib 5 arrimood oo shirkadaha lagama maarmaan u ah
in DHAQAALE, CAALAMKA, MAQAALLO, QORMO
Koronafayras shirkadaha ganacsi wuxuu ku khasbay inay kafakkaraan dib u habayh lagu sameeyo qaababka shaqo ee mudada badan lagu soo socday. Waxaana lafilayaa in mustaqbalka dhaw isbaddal wayn ku dhaco siyaasadaha shaqo ee gancsiyada.
Sida ay qortay mareegtada laga leeyahay dalka Isbayn equiposy-talento, tallaabooyinka laqaaday intii uu billawday koronafayras, waxay saamayn baaxadle ku yeesheen habka shaqo ee shirkadaha, waxaana caqaabado lagala kulmay laqabsiga xaaladda cusub si kor loogu soo qaado wax soo saarka, kobacna loo sameeyo.
Mareegtada ayaa warbixinteeda ku sheegtay in billaabashadii Koronafayras kadib ay shirkadaha iyo shaqaaluhuba door bidayaan fogaan-kashaqaynta ama in qaab online ah shaqada loo qabto, xittaa haddii suuqyada iyo isu socodka dadka si dhamaystiran u furmaan.
Baaritaan ay samaysay shirkadda ku takhasustay arrimaha latalinta ganacsiyada ee (Bain & Company) ayay ku ogaatay in %68 shaqaalaha dalka Isbayn ay fogaan-kushaqayn ama qaab online ah kuqabteen shaqooyinkooda waliba si heer sare ah.Arintaan ayaa ka dhigan in shaqada oo si wanaagsan loo qabto aysan ku xirnayn xafiisyada ama goobaha shaqo oo lajoogo.
Shirkadda Sodexo ayaa shantaan arrimood furo oga dhigtay si loola qabsado isbadalla shaqo Korona kadib:
Fogaan- Kushaqayn ( Distance Working)
Kadib markii latijaabiyay shaqada la qabto iyadoon xafiiska ama goobta shaqo lajoogin, shaqaalahu ma doonayaan inay kulaabtaan xafiisyada shaqo ama ugu yaraan waxay dhibsan doonaan inay si joogta ah goobta shaqo u tagaan sidii caadada ahayd.
Siday muujisay daraasad ay samaysay shirkadda Adecco, %77 shaqaaluhu waxay doonayaan inay isku wadaan imaanshaha goobta shaqo iyo fogaan-kushaqayn ( Distance Working). Arintaan ayaa usuurtagalinaysa shaqaalaha inay is waafajiyaan noloshooda gaarka ah iyo nolosha shaqo, waxaana yaraanaysa aadida joogtada ah ee goobta shaqada ama xafiiska.
Afar maalmood oo shaqo ah todobaadkii
Helidda wakhti nasasho oo kufilan waxay keentaa in shaqaaluhu soo laabtaan iyagoo shaqada xiiso u qaba carcarna leh, waxayna sabab u noqotaa in wax soo saarka shaqo kor ukac kuyimaado. Sidaas darted shirkadaha iyo ururada ganacsi waa inay dagsadaan siyaasad shaqo oo maalmaha shaqo looga dhigayao afar halka ay hadda kayihiin shan ama kabadan.
Aragti-uruurin ay samaysa kulliyadda Henley ee ganacsiga (Henley Business School) ayaa waxaa kasoo baxday in %77 shaqaaluhu rumaysan yihiin in noloshoodu kuwanaagsanaan doonto hadday shaqeeyaan afar maalmood todobaadkii.
Waxaa lamahuraan noqonaysa in dhaqanka shaqo loo baddalo hab hortabinta siinaya xaqiijinta yoolal, halka ahamiyadda lasiin lahaa shaqaynta saacado badan.
U shaqaynta qaab Dijitaal ah
Tiknoolajiyaddu waxay kaqayb qaadatay badbaadinta shirkadaha inay burburaan khatarta ugu jira. Arrintaan ayaa keentay in shirkaduhu ujeedsadaan kutiirsanaanta dijitaalka (Digitalization).
Ku tiirsnaanta tiknoolajiyadda ayaa aad usii xoogaysan doonta mustaqablka dhaw, waxayna isbaddal ku samayn doontaa qaababka iyo hababka shaqo, shaqaalaha ayaa ku khasbanaan doona kasbashada xirfadaha adeegsida tiknoolajiyada casirga ah ee sida dhakhsaha ah u hormaraysa.
Xoojinta xiriirka shaqaaluhu la-leeyihiin maamulka
Maadaama ay tahay in la is qabadsiiyo habka fogaan-kushaqaynta iyo goobta shaqada oo la imaanayo waxaa lagama maarmaan ah in xiriirka shaqaalaha iyo maamulka shirkadda ka dhaxeeya la adkeeyo lana hormariyo.
Waa in shaqaaluhu meel kasta oo ay joogaan sidhaw ula socdaan isbadallada iyo go,aanada kasoo baxaya maamulka shirkadda ama ururka. Waxaana lagama maarmaan ah samaynta istiraatiijiyad wada xiriir (Communication Strategy) si loo xoojiyo wax soo saarka loona sameeyo kobac.
Joojinta adeegsiga Internetka
Siduu qoray webka equiposy-talento, dadka Isbaanishka ah waxay isku celcelis shaqeeyaan labo saacadood oo dheeri ah xilliga iyagoo adeegsanaya internetka ay guryahooda kasoo shaqeeyaan.
Waxaa lagama maarmaan ah in shabakadda internetka la iska xiro kadib marka ladhamaystiro shaqo la iska sugyay, maxaa yeelay haddii qofka hawlwadeenka ahi shaqada kadib sii wado adeegsiga internetka waxay keenaysaa daal iyo caajis keena hoos udhac heerka wax soo saarkiisa iyo wax soo saarka guud ee shirkadda.
Waxaa Qortay Al-Jazeera
Raysalwasaaraha Lubnaan oo iscassilay
Tirada dadkii kudhintay weerarkii Xabsiga Dhexe oo korortay